Cumar Filish oo ka hadley sababta ay ardeyda Banaadir ugu dhaceen imtixaanka shahaadiga dugsiga sare | XORRIYA NEWS
Home Wararka Cumar Filish oo ka hadley sababta ay ardeyda Banaadir ugu dhaceen imtixaanka...
Cumar Filish oo ka hadley sababta ay ardeyda Banaadir ugu dhaceen imtixaanka shahaadiga dugsiga sare
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa ka hadlay ardaydii gobolka Banaadir ee ku dhacday imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare.
Cumar Filish ayaa sheegay in sababta ardaydaas ay imtixaanka ugu dhaceen ay tahay dadaal yari xagooda ah, isla markaana ay ku mashquuleen isticmaalka aaladda Tiktok iyo muqaadaraadka loo yaqaano Taabuu-ga.
“Waxaad ogtihiin imtixaankii shalay natiijadiisa la shaaciyey ee dugsiga sare lambarka arday ee ka dhacday, qaar ayaa hadda isku deyaaya inay banaanbax sameeyaan, laakiin waalidku ma oga waxa ay ilmahoodu ku mashquulsanyihiin” ayuu yiri.
Cumar Filsih oo hadalkiisa sii watay ayaa yiri “Waxaa lagu mashquulay Tiktok iyo Taabuu, marka qof kasta oo waxaas tacliintiisa uga mashquulay natiijadaas ayuu dhaxlayaa, qof kasta oo habeeno u soo jeeda dhisitaanka nafsadiisana mustaqbal ayuu dhisayaa, qofkii doonaya in uu meel gaarana runtii habeenuu dhafraa.”
Hadalka guddoomiyaha ayaa ku soo aadaya xilli gobolka Banaadir oo kaliya ay ka dhacday in ka badan 7,000 oo arday, halka guud ahaan gobollada kalena ardayda dhacday ay ka yaryihiin 2,000 taas oo dhalisay hadal heyn iyo shaki badan oo ku geedaaman imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanadkan ay qaaday wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka.